Home Wararka MW Saciid Deni oo si rasmi ah ugu martiqaaday MW DG Galmudug Axmad...
MW Saciid Deni oo si rasmi ah ugu martiqaaday MW DG Galmudug Axmad D. Xeef Caleemasaarkiisa?
Sida ay MOL soo gaarsiiyeen howlwadeenada Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Galmudug, Madaxweyne Axmad Ducaale Xeef ayaa si rasmi ah loogu martiqaaday in uu ka qayb galo caleemasaarka Madaxweynaha cusub ee Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullahi Deni.
Sidoo kale xaflada caleemasaarka ayaa lagu wadaa in ay ka soo qayb galaan wafdi ka socda Dowlada Fedaraalka, gaar ahaa wnaxaa codsaday in uu goobjoog ka ahaado caleemasaarka RW Xassan Cali Kheyre. Waxa dad badan is weydiinayaan sida ay suuragal ku tahay in ay meel ka wada hadlaan RW Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo rumaysan in MW Xeef uusan ahayn madaxweynaha rasmiga ah ee dowlad Goboleedka Galmudug. RW Kheyre ayaa lacag ku baxiyay in si been abuur ah loo doorto Axmad Maxamud Baasto oo ilaa iyo hadda ayan jirin cid aqoonsatay.
Warar ah heshay MOL ayaa sheegaya in RW Kheyre iyo MW Farmaajo ay doonayaan in ay la heshiiyaan MW Xeef inta aan la gaarin caleemasaarka MW Saciid Deni si ayan waji gabax ugala kulmin xaflada Caleemasaarka.
16 bisha Janaayo ayaa lagu wadaa in caleemasaarku ka dhaco magaalada Garowe.